Jordania · Marsa, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Jordania · Marsa, 2008
Tantara mikasika ny Jordania tamin'ny Marsa, 2008
Ejipta 26 Marsa 2008
Anio, 19 mars, no manamarika ny fahadimy taonan'ny “Ezaka ho fanafàhana an'i Irak”. “Tany amboalohany dia tetika nentina handrodànana an'i Saddam Hussein sy ” hamàrana ny ady tsy mbola miantomboka” mbola mitohy hatramin'izao ny ady ao Irakl, mampivarahontsana ny olon-tsotra maro maneran-tany. Anatin'ity lalan-dra ity, Global Voices Online no hamoaka...
Fahalalahàna miteny 21 Marsa 2008
Teratany 17 Marsa 2008
“Isan'ny fombafomba ahiana indrindra any amin'ny faritra afovoany atsinanana ny “fitadiavam-bady”. Tsy mampiahiahy ny mpitady vady lahy sy ny fianakaviany irery ihany. Fa koa hita fa mampietry ny vehivavy izay mihevitra fa manambay vehivavy izy ity” hoy i Qwaider, avy any Jordana.